Ny varotra sy ny varotra | Martech Zone
Ny traikefan'ny mpanjifa dia efa ela, ary mbola ho laharam-pahamehana ho an'ny orinasa B2B amin'ny diany mankany amin'ny fanovana nomerika. Ao anatin'ity fiovàna mankany amin'ny nomerika ity, miatrika fanamby sarotra ny fikambanana B2B: mila miantoka ny tsy fitoviana sy ny kalitao manerana ny traikefa amin'ny fividianana an-tserasera sy ivelan'ny aterineto. Na izany aza, na dia eo aza ny ezaka tsara indrindra ataon'ny fikambanana sy ny fampiasam-bola lehibe amin'ny varotra nomerika sy e-varotra, ny mpividy dia tsy dia gaga loatra amin'ny diany mividy an-tserasera. Araka ny vaovao farany
Zoma, Desambra 17, 2021 Zoma, Desambra 17, 2021 Douglas Karr
Raha namaky ny lahatsoratro ianao tato anatin'ny volana vitsivitsy, dia ho hitanao fa nizara bebe kokoa momba ny ecommerce aho, indrindra momba ny Shopify. Ny orinasako dia nanangana tranokala Shopify Plus namboarina sy nampidirina ho an'ny mpanjifa. Raha tokony handany volana sy dolara an'aliny amin'ny fananganana lohahevitra iray hatrany am-boalohany izahay, dia niresaka tamin'ny mpanjifa izahay mba hamela anay hampiasa lohahevitra voaorina tsara sy tohanana izay